Samsung rumo na ị ga-ebelata Galaxy S22 ma chekwaa ihuenyo kacha mma na iko maka S22 Ultra - 【Comparison】
Apple Watch SE (GPS, 40mm) Ọlaedo Aluminom - Sand Pink Sport Band
GPSdị GPS na-enye gị ohere ịkpọ oku ma zipụ ozi site na nkwojiaka.
Samsung nụrụ asịrị na ịbelata Galaxy S22 ma chekwaa ihuenyo kacha mma na iko maka S22 Ultra
Dabere na onye nwere ike ime Samsung, ihe ngebichi na Samsung Galaxy S22 na S22 Plus ga-adalata ma e jiri ya tụnyere Galaxy S21, ebe Galaxy S22 Ultra ga-adị elu karịa onye bu ya ụzọ.
Onye na-ebugharị Twitter Mauri QHD natara nha ihu igwe maka Galaxy 2022 igwe site na isi ya. E jiri ya tụnyere akara S21, Galaxy S22 na S22 Plus nwere ike ịpịkọta site na 6.2 "(157mm) ruo 6.05" (154mm) na 6.7 "(170mm) na 6.55" (166mm).
Ka ọ dịgodị, Galaxy S22 Ultra nwere ike ịda site na 6.8 "ruo 6.81". Ce 0,01 ″ ma ọ bụ 0,25 mm supplémentaire, presque imperceptible à l'œil humain, permet à Samsung de se vanter nke bụ ekwentị ọhụrụ gbakwunyere nnukwu, mais ne devrait pas beaucoup changer l'expérience par rapport au produit phare de l 'afọ gara aga.
Galaxy S226.06 «6.55» 6.81 «Naanị Ultra bụ LTPO si na Hades m (7/8 ziri ezi) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 June 11, 2021
Mauri na-ekwukwa na "Naanị Ultra bụ LTPO," na-ezo aka na teknụzụ polycrystalline oxide dị ala dị ala iji dochie ọnụego ume ọhụrụ dị iche iche na-enweghị oke ndụ batrị. N'afọ a, naanị S21 Ultra nwere LTPO na ọnụego ume ọhụrụ 120Hz, ka usoro a wee nwee ike ịga n'ihu na ekwentị S22.
Iji jiri ya tụnyere, asịrị iPhone 13 kachasị ọhụrụ na-atụ aro na iPhones ọhụrụ abụọ ga-enweta ogwe LTPO nke na-akwado 120Hz. Anyị ga-ahụ etu nke a si emetụta ọnụahịa, arụmọrụ, na ndụ batrị site na ịtụle ụdị ekwentị abụọ kacha ere ahịa.
Dị ka S21 Ultra (nke dị n'elu), S22 Ultra ga-enwe batrị na-echekwa ngwa ngwa batrị (Ebe E Si Nweta Foto: Ọdịnihu)
Iko ọzọ na-ata ájá?
Ihe ozo nke nwere ike ime, nke SamMobile huru taa, na-ekwu na Samsung na-eche echiche itinye iko na Galaxy S22 Ultra. Nke a pụtara na, na mgbakwunye na ogo ihuenyo ọhụrụ ya, Galaxy S22 Plus ga-efunahụ iko mara mma nke S21 Plus na-akwado polycarbonate "Glasstic" nke Samsung.
Ọtụtụ ndị na-ahọrọ ekwentị nwere ihe mkpuchi azụ plastik n'ihi na ha na-anagide ntụ oyi karịa ndị nwere ọkaibe karịa. Ọ bụ ezie na ndị nyocha anyị nwere mmasị na atụmatụ nke S21 na S21 Plus, Samsung nwere ike ịmasị ịnye igwe kọmpat na ike ndị ọzọ n'afọ ọzọ.
N'agbanyeghị nke ahụ, asịrị ndị ahụ agbakọrọ ọnụ na-egosi na Samsung chọrọ S22 Ultra ka ọ pụọ karịa ekwentị abụọ ndị ọzọ dị ka nkwalite dị ịrịba ama. Anyị anụkwala na S22 Ultra (na naanị Ultra) nwere ike ịnwe ihe mmetụta igwefoto 200MP yana mbugharị ngwa anya na-aga n'ihu.
Maka ugbu a, anyị ga-ewere asịrị ndị a niile na ọtụtụ nnu nnu; Ọ bụghị naanị na ekwenyeghị ha, mana ndị injinia Samsung nwere ike ịgbanwe obi ha ngwa ngwa na usoro mmepụta. Anyị achọpụtakwala na nsị na nso nso a na-egosi na S22 agaghị enwe igwefoto anaghị egosipụta, ma ọ bụ ihe mmetụta 3D nke oge ụgbọ elu maka igwefoto ya.
Site na Arena